Gabriela García Calderón, fito taona niarahana tamin’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2019 6:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, Español, Aymara, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Ôktôbra 2014)
Gabriela tany Kenya tamin'ny 2010, miaraka amin'ny Rift Valley ao aoriany. Sary an'i Gabriela García Calderón Orbe
Niditra tato amin'ny Global Voices i Gabriela García Calderón tamin'ny 2007. Ary nanomboka teo, nanolo-tena sy tsara fandraisana hatrany izy, manome ny anjara-birikiny tsy an-kiato miaraka amin'ireo lahatsoratra tsy misy kianina, tamin'ny famoronana ity vondrompiarahamonina mavitrika ity, izay mankalaza ny fahafolo taonany. Isan'ireo mpandray anjara mazoto sy miresaka momba anà lohahevitra maro izy, ary vao haingana izay dia lasa toniandahatsoratra miserana éditeur intérimaire misahana an'i Amerika Latina.
Global Voices (GV): Rehefa nitafatafa niaraka taminao i Juan Arellano tamin'ny Jolay 2009, efa mpandika teny ho an'ny GV amin'ny teny Espaniola nandritra ny roa taona teo ho eo ianao. Amin'izao, 7160 ireo lahatsoratrao ao amin'ny GV amin'ny teny Espaniola- izay isa ambony indrindra ao amin'ny GV raha tsy diso aho – ary maherin'ny 415 ny ao amin'ny GV amin'ny teny Anglisy. Ankoatra izay, nisahana ny toeran'ny toniandahatsoratra mpandimbin'ny GV ho an'i Amerika Latina ianao nandritra ny fotoana fohy. Lazao anay ireo dingan'ny fandraisanao anjara tato anatin'ny Global Voices.
Gabriela García Calderón (GGC): Dingana niandalana daholo no nolalovako. Nanomboka tany amin'ny farany taona 2007 tany aho, nandika teny an-tsitrapo ho an'ny GV amin'ny teny Espaniola ary roa taona taty aoriana, nanasa ahy ho mpanoratra i Eddie Avila, lehiben'ny mpanoratra tao amin'ny faritra tamin'izany. Araka izany dia lasa mpandika teny an-tsitrapo aho no sady mpanoratra. Rehefa naka fotoana tsy iasàna noho ny fiterahany ny lehiben'ny mpanoratra tao aminay, Silvia Viñas, nangataka ahy izy mba hanolo azy mandritra ireo roa volana tsy hiasany. Ary rehefa nanapa-kevitra ny hiova asa izy, nangatahana aho mba hanolo azy mandra-pahita solony.
Teo anelanelan'izay, nanoratra vitsivitsy ho an'ny Rising Voices ihany koa aho, etsy andaniny, manampy an'i Eddie Avila aho amin'izao anatin'ny tetikasa Rising Voices Amazonia [fr].
GV: Nanova ny fomba fijerinao an'izao tontolo izao ve ny traikefa azonao tamin'ny fandikanteny, ny famoronana sy ny fanitsiana tanatin'ireny taona ireny?
GGC: Eny, mahatonga ahy hieritreritra bebe kokoa an'ireo olona iantefan'ny vaovao na hetsika tsirairay izay taterintsika izany. Tsy mijanona eo amin'ireo loza na fihetsiketsehana fotsiny ihany ireo vaovao, fa eo ny ankizivavy mitantara ao amin'ny Twitter ny tsy fahasalamàny rehefa nisy nanipy entona mandatsa-dranomaso teo akaikiny, na ny tantaran'ny mpirotsaka an-tsitrapo iray mizara ny fandinihany taorian'ny nahitany mivantana ny vokatry ny rivodoza. Izay mahatonga ahy hijery ny lafiny maha-olona amin'ireo vaovao ary mahatonga saina ahy fa tsy resaka salanisa sy isa fotsiny ihany izany, fa olombelona.
GV: Misy fiantraikany eo amin'ny asanao amin'ny maha mpisolovava anao ve ny asanao miaraka amin'ny GV?
GGC: Ny fidirako tato anatin'ny GV dia nahatonga ahy hahatsapa kokoa ny miseho manerana izao tontolo izao. Torak'izany ihany koa, rehefa ampahafantarina raharaham-pitsaràna iray aho, manana fahazarana mifantoka amin'ny fomba iantefany amin'olona iray mba iezahako mampanaja ny lalàna. Mamaky betsaka momba ireo toerana tsy ahazoan'ny olona rariny isika, hany ka sambatra aho amin'ny toerana misy ahy izay ahafahako manampy olona hampanaja ny zony.
GV: Niova be ve ny tontolon'ny mediam-bahoaka tao Amerika Latina hatramin'ny, ndeha hatao hoe, 2009?
GGC: Tamin'ny 2009, tsy nampiasaina toy ny fampiasàna azy amin'izao ny Twitter. Ankehitriny, maneho ny heviny amin'ny alalan'ny Twitter ireo mpanao pôlitika ary indraindray dia miteraka resabe noho ny tarehintsoratra 140 monja. Mampiasa ny Twitter koa ireo olompirenena tsotra mba hitorohana ireo tranga heveriny fa hanitsakitsahana ny zony. Na hampandrenesana horohorontany, mateti-pitranga ato amin'ity firenena ity. Ohatra, andro vitsy lasa izay, nisy horohorontany tao Lima. Elaela ny media vao nihetsika. Saingy taorian'izay dia nanomboka nanototra hafatra momba ilay horohorontany avy hatrany ny Twitter.
GV: Bilaogera mavitrika ihany koa ianao. Inona ny anjara toerana misy io asa io eo amin'ny fiainanao andavanandro ?
GGC: Fotoam-pahasambarana sy namana tsara maro avy aminà firenena samihafa, ny fiheverana fa tsy hanenenana ny fizaràna hetsika sy tranga miseho andavanandro na faran'izay eritreretintsika ho tsy misy dikany aza, izany no nentin'ny bilaogiko ho ahy. Tsy mampino ny mahita ny fitovian-kevitra sy fisainantsika rehefa miatrika tranga tsotra iray, na miseho any Peró izany, na any Espaina na any Qatar.
GV: Afaka manome antsipiriany kely amin'ny fomba fandrindranao ny fotoananao ho an'ireo asa rehetra ireo ve ianao, anatin'izany ny asanao amin'ny maha mpisolovava? Manana torohevitra?
GGC: Samy mitondra ny olany avy ny andro tsirairay. Ny ataoko isanandro dia ny mizara ny asako ary mijery ireo izay atao laharampahamehana. Raha misy lahatsoratra ao amin'ny GV ilaina avoaka tsy misy hataka andro, tsy maintsy miandry ny ambiny rehetra. Toy izay ihany koa ny ataoko amin'ny asa hafa rehetra. Mandaitra io amin'ny andro fiasàna. Ny faran'ny herinandro kosa, miezaka miala lavitry ny solosaina aho, izay tsy moramora! Misy fotoana, tsy maintsy mijery ny imailako sy manao ny asa sasany ihany aho mba hanamaivanana ny asa miandry ahy mandritra ny herinandro .
GV: Misy zavatra hafa tianao hanampiana?
GGC: Mirary fahafolo taona sambatra ho an'ny GV aho sy taona maro hafa mitsingeringerina ho azy. Tena faly aho fa anisan'ny mpikambana anatin'ity vondrompiarahamonina tsy mampino ity, izay andraisana ny tsirairay ho olombelona ary samy manana ny heviny ny rehetra.